कर्पोरेट ब्लगि:: कम्पनीहरूबाट शीर्ष १० प्रश्नहरू Martech Zone
बुधबार, जुलाई 18, 2007 मंगलवार, मे 3, 2016 Douglas Karr
यदि त्यहाँ एक चीज छ जुन तपाईंलाई वास्तविकतामा फर्काउँछ भने, यो ब्लगिंग र सोशल मिडियामा छलफल गर्न क्षेत्रीय व्यवसायहरूसँग भेट गर्दछ।
संभावनाहरू छन्, यदि तपाईं यो पढ्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले ब्लगि,, सामाजिक मिडिया, सामाजिक बुकमार्किंग, खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन, आदि बुझ्नुहुन्छ। तपाईं अपवाद हुनुहुन्छ!
'ब्लागोसियर' बाहिर, कर्पोरेट अमेरिका अझै पनि एक डोमेन नाम फेला पार्न र एक वेब पृष्ठ राख्ने संग कुश्ती गर्दैछ। तिनीहरू वास्तवमै छन्! धेरै अझै वर्गीकृत, पहेंलो पृष्ठ र डायरेक्ट मेलमा हेर्दै छन् शव्दलाई बाहिर निकाल्न। यदि तपाईंसँग पैसा छ भने, हुनसक्छ तपाईं रेडियो वा टिभीमा जान सक्नुहुन्छ। यी सजिलो माध्यमहरू हुन्, होइनन्? भर्खर एउटा चिन्ह, एक ठाउँ, एक विज्ञापन राख्नुहोस् ... र व्यक्तिहरू यसलाई हेर्नको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्। होईन विश्लेषण, पृष्ठदृश्यहरू, अद्वितीय आगन्तुकहरू, रैंकिंग, permalinks, पिंगहरू, ट्र्याकब्याक, आरएसएस, पीपीसी, खोज ईन्जिन, र्याकिंग, अधिकार, प्लेसमेन्ट - केवल आशा र प्रार्थना कसैले तपाइँको कम्पनी सुन्छ, हेर्छ वा देख्दछ।
यो वेब कुरा हो छैन ठेठ कम्पनी को लागी सजिलो। यदि तपाईं मलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने, क्षेत्रीयबाट रोक्नुहोस् वेब सम्मेलन शुरुआतीहरूको लागि, एक क्षेत्रीय मार्केटिंग सम्मेलन वा वाणिज्य चेम्बर। यदि तपाईं आफैंमा आफैलाई चुनौती दिन चाहनुहुन्छ भने, बोल्ने मौका लिनुहोस्। यो आँखा खोल्ने छ!
कम्पनीहरूबाट ब्लगिंगमा शीर्ष १० प्रश्नहरू:
ब्लगिंग के हो?
हामीले किन ब्लग गर्नुपर्छ?
ब्लगि and र एक वेबसाइट बीच के भिन्नता छ?
ब्लगिंग र वेब फोरम बीच के भिन्नता छ?
यो कति खर्च गर्छ?
कति पटक हामीले यो गर्नुपर्छ?
के हामीले हाम्रो ब्लगलाई हाम्रो वेबसाइटमा होस्ट गर्ने वा होस्ट गरिएको समाधान प्रयोग गर्ने?
नकारात्मक टिप्पणीहरूको बारेमा के भन्न सकिन्छ?
एक भन्दा बढी व्यक्ति ब्लग गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी कसरी आफ्नो ब्रान्ड नियन्त्रण गर्छौं?
उद्योगमा दिक्क लाग्दा, जब म यी प्रश्नहरू पहिलो चोटि सुनेँ मलाई अलमल्लमा पारियो। सबैलाई ब्लगि aboutको बारे थाहा थिएन? प्रत्येक मार्केटर सोशल मिडियामा म भए जस्तो गरीएको थिएन?
यहाँ मेरो प्रतिक्रियाहरू छन्:
ब्लगिंग के हो?वेबलगका लागि ब्लग केवल छोटो छ, एक अनलाइन जर्नल। सामान्यतया, एक ब्लग पोष्टहरू सँग मिल्दछ जुन शीर्ष रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ र प्राय: प्रकाशित हुन्छ। प्रत्येक पोष्टको अद्वितीय वेब ठेगाना हुन्छ जुन तपाईं यसलाई फेला पार्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक पोष्टको सामान्यतया पाठकको प्रतिक्रिया लिन एक टिप्पणी गर्ने संयन्त्र हुन्छ। ब्लगहरू HTML (साइट) र मार्फत प्रकाशित हुन्छन् आरएसएस फिडहरू।
हामीले किन ब्लग गर्नुपर्छ?ब्लगसँग अद्वितीय अंतर्निहित टेक्नोलोजीहरू पनि हुन्छन् जसले सर्च इन्जिन टेक्नोलोजीहरू र अन्य ब्लगरहरूसँग सञ्चारको लाभ उठाउँदछ। लोकप्रिय ब्ल्गरहरू उनीहरूको उद्योगहरूमा चिन्तित नेताको रूपमा हेरिन्छन - उनीहरूको क्यारियर वा उनीहरूको व्यवसायलाई टेवा दिन मद्दत गर्दछ। ब्लगहरू पारदर्शी र संचार हुन्छन् - व्यवसायहरूलाई मद्दत पुर्‍याउन उनीहरूका ग्राहकहरू र सम्भावनाहरू सिर्जना गर्न।
ब्लगि and र एक वेबसाइट बीच के भिन्नता छ?मँ तपाईको स्टोरको बाहिरी साइनमा वेबसाईटको तुलना गर्न मनपराउँछु र तपाईको ब्ल्ग हेन्ड श्याक हो जब संरक्षक ढोकामा हिड्दछन्। 'ब्रोशर' शैली वेबसाइटहरू महत्त्वपूर्ण छन् - ती तपाईंको उत्पादनहरू, सेवाहरू, कम्पनी ईतिहासको लेआउट गर्छन्, र सबै आधारभूत जानकारीको उत्तर दिन्छन् जुन कसैले तपाईंको कम्पनीको बारेमा खोजी गर्दैछ। ब्लग हो जहाँ तपाईं वास्तवमै तपाईंको कम्पनीको पछाडि व्यक्तित्व परिचय गर्नुहुन्छ। ब्लग शिक्षा, संचार, आलोचना प्रतिक्रिया, उत्साह ड्राइव र तपाइँको कम्पनी को दर्शन समर्थन गर्न प्रयोग गर्नु पर्छ। यो सामान्यतया थोरै औपचारिक, कम पालिश गरिएको हो, र व्यक्तिगत अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ - मार्केटिंग स्पिन मात्र होईन।
ब्लगिंग र वेब फोरम बीच के भिन्नता छ?सायद ब्लगको बारेमा सब भन्दा ठूलो कुरा यो हो कि ब्ल्गरले सन्देश ड्राइभ गर्दछ, न कि आगन्तुकलाई। जे होस्, आगन्तुकले यसलाई प्रतिक्रिया दिन सक्दैन। वेब फोरमले जो कोहीलाई कुराकानी सुरु गर्न अनुमति दिन्छ। म दुबैको लक्ष्य फरक तरिकाले हेर्न चाहन्छु। IMHO, फोरमले ब्लग प्रतिस्थापित गर्दैन वा यसको विपरित गर्दछ - तर मैले दुबैको सफल कार्यान्वयन देखेको छु।
यो कति खर्च गर्छ?कसरी गर्छ मुक्त आवाज? त्यहाँ एक टन ब्लगिंग अनुप्रयोगहरू छन् - दुबै होस्ट गरिएको र सफ्टवेयर जुन तपाईं आफ्नै ब्लगमा चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंको दर्शक विशाल छ भने, तपाईं केहि ब्यान्डविथ मुद्दाहरूमा दौडिन सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई अझ राम्रो होस्टिंग प्याकेजमा किन्न आवश्यक पर्दछ - तर यो निकै विरलै छ। कर्पोरेट दृष्टिकोणबाट, म तपाईंको वेब होस्ट वा तपाईंको विकास कम्पनीसँग काम गर्ने तपाईंको अधिकतम बनाउन ब्लगिंग रणनीतिहरू र तिनीहरूलाई तपाईंको ब्रोसर साइट वा उत्पादनको साथ एकीकृत गर्नुहोस्, यद्यपि! दुवैले एक अर्कालाई राम्रोसँग प्रशंसा गर्न सक्छन्!
कति पटक हामीले यो गर्नुपर्छ?फ्रिक्वेन्सी स्थिरता जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छैन। केही व्यक्तिहरू सोध्छन् म मेरो ब्लगमा कती पटक काम गर्दछु, मलाई लाग्दैन कि म सामान्य हो। म सामान्यतया प्रति दिन २ पोष्टहरू गर्छु ... एउटा साँझमा छ र अर्को समयको पोष्ट हो (प्रिग्रिटर गरिएको) जुन दिनमा प्रकाशित हुन्छ। प्रत्येक साँझ र बिहान म मेरो नियमित कामको बाहिर मेरो ब्लगमा काम गर्न २ देखि hours घण्टा खर्च गर्दछु। मैले शानदार ब्लगहरू देखेको छु जुन प्रत्येक मिनेटमा पोस्ट गर्दछ र अरू हप्तामा एक पटक पोस्ट गर्दछन्। केवल पहिचान गर्नुहोस् कि एकचोटि तपाईंले नियमित पोष्टहरूको साथ अपेक्षाहरू सेट गर्नुभयो कि ती ती आशाहरू राख्नुपर्छ, अन्यथा तपाईं पाठकहरू हराउनुहुनेछ।
के हामीले हाम्रो ब्लगलाई हाम्रो वेबसाइटमा होस्ट गर्ने वा होस्ट गरिएको समाधान प्रयोग गर्ने?यदि तपाईं मेरो लामो समयको पाठक हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई थाहा छ कि म व्यक्तिगत रूपमा मेरो आफ्नै ब्लग होस्ट गर्न चाहन्छु किनभने लचिलोपनको कारण यसले मलाई डिजाइन परिवर्तन गर्दछ, अन्य सुविधाहरू थप्दै, कोड आफैंलाई परिमार्जन गर्ने आदि। ती पोष्टहरू, यद्यपि होस्ट गरिएको समाधानहरूले वास्तवमै बार हटायो। तपाईं अब एक होस्ट गरिएको समाधानको साथ काम गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको आफ्नै डोमेन नाम छ, तपाईंको विषयवस्तु अनुकूलित गर्नुहोस् र उपकरणहरू र सुविधाहरू थप गर्नुहोस् साथ साथै यदि तपाईं आफ्नै आफ्नै होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने। ब्लगर तर चाँडै यसलाई प्रयोग गरेर होस्ट गरिएको समाधानमा सारियो WordPress। मँ 'मेरो डोमेन प्रयोग गर्न' र साईट लाई अनुकूलित गर्न चाहान्छु। म कसैलाई पनि निरुत्साहित गर्ने छैन - एक निगम पनि - एक होस्ट गरिएको समाधान जस्तै प्रयोगबाट VOX, Typepad, ब्लगर or WordPress मात्र सुरु गर्न र प्रयोग गर्न।
यदि तपाईंको निगम वास्तवमै गम्भीर छ भने, मँ केही ब्लगि some २.० प्याकेजहरू जस्ता अवश्य जाँच गर्दछु कम्पेन्डियम!
कम्पेन्डियम सफ्टवेयर मेरो दुई जना राम्रा साथीहरू क्रिस बगगट र अली बिक्रीले सुरु गरेका थिए र यो ब्लगि .को अर्को विकास हो।
नकारात्मक टिप्पणीहरूको बारेमा के भन्न सकिन्छ?केही व्यक्तिहरू विश्वास गर्छन् तपाईंसँग इमान्दार ब्लग हुन सक्दैन जब सम्म कोही र सबैले यसमा टिप्पणी गर्न सक्दैनन् - चाहे यो गलत हो वा अपमानजनक छ। यो केवल हास्यास्पद छ। तपाईले कमेन्टमा अप्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ - तर तपाईले मूल्यवान उपयोगकर्ताले बनाएको सामग्री गुमाउनु भएको छ! तपाईंको ब्लगमा टिप्पणी गर्ने व्यक्तिहरूले जानकारी, स्रोतहरू, र सल्लाह थप्दछन् - दुबै मूल्य र सामग्री थप्दै।सम्झनु: खोज ईन्जिनहरूले सामग्री मन पराउँछन्। प्रयोगकर्ताले उत्पन्न गरेको सामग्री शानदार छ किनकि यसले तपाईंको लागि लागत खर्च गर्दैन तर तपाईंको श्रोतालाई बढी प्रदान गर्दछ! कुनै टिप्पणीहरू नभई आफ्नो टिप्पणीहरू मध्यम गर्नुहोस् र राम्रो टिप्पणी नीति राख्नुहोस्। तपाईंको टिप्पणी नीति छोटो र सरल हुन सक्छ, यदि तपाईंको मतलब हो भने - म तपाईंको टिप्पणी पोष्ट गर्दै छैन! रचनात्मक नकारात्मक टिप्पणीहरूले कुराकानीमा थप्न सक्दछन् र तपाइँको पाठकहरूलाई तपाइँ कस्तो प्रकारको कम्पनी हुनुहुन्छ भनेर देखाउन सक्दछन्। म सबै भन्दा हास्यास्पद वा स्प्याम बाहेक सबैलाई अनुमोदन गर्छु। जब म टिप्पणी मेटाउँछु - म सामान्यतया व्यक्तिलाई ईमेल गर्दछु र किन भनेर बताउँछु।
एक भन्दा बढी व्यक्ति ब्लग गर्न सक्नुहुन्छ?पक्कै! ती प्रत्येक कोटि भित्र श्रेणिहरु र ब्लगरहरु रोचक छ। किन सबै व्यक्तिहरूलाई दबाब दिन्छ? तपाईंसँग प्रतिभाको सम्पूर्ण कम्पनी छ - यसलाई प्रयोगमा राख्नुहोस्। मलाई लाग्छ तपाईं साँच्चिकै आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि तपाईंको सबैभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा लोकप्रिय ब्लगरहरू को हुन् (म शर्त दिन तयार छु कि तिनीहरू तपाईंको मार्केटिंग मान्छेहरू होइनन्!)
हामी कसरी आफ्नो ब्रान्ड नियन्त्रण गर्छौं?संसारमा ,80,000,000०,०००,००० ब्लगहरु सयौं हजार संग हरेक हप्ता जोडिन्छ ... के अनुमान? व्यक्ति तपाईंको बारेमा ब्लग गर्दै छन्। सिर्जना गर्नुहोस् गुगल चेतावनी तपाईंको कम्पनी वा उद्योगको लागि र तपाईंले फेला पार्न सक्नुहुन्छ कि मानिसहरू तपाईंको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्। तपाईं चाहानुहुन्छ कि भन्ने प्रश्न हो उनीहरु तपाइँको ब्रान्ड नियन्त्रण गर्न वा तपाईं तपाईंको ब्रान्ड नियन्त्रण गर्न! ब्लगिंगले पारदर्शिताको स्तर प्रदान गर्दछ जुन धेरै कम्पनीहरूमा सहज हुँदैन। हामी भन्छौं कि हामी पारदर्शी हुन चाहन्छौं, हामी पारदर्शितालाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौं, तर हामी यसको मृत्युसँग डराउँछौं। यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंको कम्पनीले पराजित गर्न सक्ने छ। सबै ईमानदारी मा, यद्यपि, तपाइँको ग्राहकहरु र सम्भावितहरु लाई पहिल्यै पहिचान छ तपाइँ परिपूर्ण हुनुहुन्न। तपाईं गल्ती गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो ब्लगको साथ गल्तीहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ। विश्वासको सम्बन्ध जुन तपाईं आफ्ना ग्राहकहरू र सम्भावनाहरूको साथ बनाइरहनुभएको छ तपाईंले बनाउनुहुने कुनै स्लिप अपलाई हटाउनेछ।
टैग: ब्लगिंगब्लगिंग प्रश्नहरुब्लागोस्फीयरब्रान्डकम्पनी ब्लगकर्पोरेट ब्लगिडमीहरूको लागि कर्पोरेट ब्लगि।ब्लगि cost लागत कति छहामी कत्ति पटक ब्लग गर्नुपर्छनकारात्मक टिप्पणीहरूके हामीले हाम्रो ब्लग होस्ट गर्नु पर्छ?के भनेको छ?एक ब्लग र एक वेबसाइट बीच के फरक छकिन हामी ब्लग गर्नुपर्छ
जुलाई १,, २०१ at १::19२ अपराह्न
ब्लगि as यति सजिलो छैन जस्तो मैले सोचें कि यो थियो, मसँग लिल प्रश्न छ, म भेनेजुएलाबाट छु, यहाँ ब्लगि याहू वा गुगलको रूपमा परिचित छैन ... तर केही वर्षमा राम्रो बजार हुने छ, त्यसैले अब म साधारण ब्लगबाट सुरू गर्दैछु http://bajaloads.com (लोल्ज म टिपिंग सूचीमा छु), म आफ्नो ब्राण्ड बाजालोडहरू विस्तार गर्न चाहान्छु
(बाजा = स्पेनिशमा तल) ... स्पेनी भाषामा समाचार ब्लगहरू बनाउँदै, मेरी बहिनीले ब्लग चलाउने छ, मेरी केटी अर्को, र मेरो साथीको अर्को अर्को… ती सबै स्प्यानिशमा छन् ... र म पनि एकै समयमा म हुँ विश्वविद्यालयमा तिनीहरूलाई प्रचार गर्नुहोस्, लाइनमा ... सबै ठाउँमा स्प्यामिंग बिना, प्रश्न यो हो: यदि मैले मनपराउने ब्लग पोष्टहरूमा यस्तो टिप्पणी पोष्ट गर्छु भने के म अझ राम्रो एसईओ रैंकिंग प्राप्त गर्न सक्छु? (किनकि मैले मेरो युआरएल निर्देशन दिनुपर्दछ र यो मेरो पोष्टनाममा देखाइन्छ)
धेरै राम्रो पोष्ट। म सर्वसाधारणलाई बुझ्न नसक्दा म छक्क पर्छु। जब तपाईं मध्यम पौडी खेल्नुहुन्छ, तपाईं सोच्नुहुन्छ कि सबैजनालाई यसको बारे थाहा छ। र हो, यो मान्छेहरु लाई जो धेरै इन्टरनेट को बारे मा धेरै कम थाहा छ को लागी डरलाग्दो हुन सक्छ, एक्लै ब्लगि let गरौं। जे भए पनि, व्यवसाय र ब्लगि onमा सहयोगी विश्लेषण।
म मेरो टिप्पणी हेर्न सक्दिन, त्यो डग किन हो ??
टिप्पणीहरूको साथ केही बग्गी जस्तो देखिन्छ ... म यसमा काम गर्दै छु ... हम्म।
त्यसोभए चिन्ता नलिनुहोस्, म केवल भेनेजुएलामा आफ्नै "कर्पोरेसन" सिर्जना गर्ने कुरा गरिरहेको थिएँ किनकि यहाँ ब्लगहरू राम्रोसँग चिनिन सकेन 😛
म उप डोमेनहरू सिर्जना गर्ने बारे सोच्दै थिएँ:
ती सबै मेरो बहिनी, मेरो प्रेमिका र उनको साथी द्वारा चलाइएकी छन् (मैले उनीहरूलाई त्यति धेरै तिर्नु पर्दैनथ्यो किनकि मैले अमेरिकी नाफामा कमाउने छु र म भेन्ट बोलिभरेसमा तिर्नेछु)।
प्रश्न यो हो, - के म राम्रो एसईओ पोष्टिंग प्राप्त गर्न सक्छु यदि म यस जस्तो मान्यता प्राप्त ब्लगहरूमा टिप्पणी गर्दछु? (किनकि मैले मेरो युआरएल साझेदारी गर्नुपर्दछ)
साथै म तपाईं द्वारा टिप हुन लाइनमा छु :-D, यद्यपि मैले केहि सुझावहरू लिएको छु जुन तपाईंले अन्य ब्लगरहरूलाई दिनु भएको छ,
शान्ति भाई 😀